समाज – Page4– Nagarik Today
May62018 by suchanapatiNo Comments
भक्का खान ३ घण्टा लाइन
नागरिक बिचार, समाज
काठमाण्डौं २३ बैशाख । मानिस चाहे संसारको जुनसुकै ठाउंमा पुगोस् । तर उसलाई आफ्नो ठाउंको स्वादले भने तानेकै हुन्छ । विदेशी परिकारको स्वाद जति खाए पनि आफ्नो ठाउंको रैथाने खानाले सबैलाई मोहित बनाउँछ । बिरानो ठाउंमा बसेको बेलामा रैथाने खानाको स्वाद लिन पाउँदा कम्ति खुसी लाग्दैन । त्यस्तै रैथाने स्वाद लिनेहरुको पुरानो बानेश्वर चोकमा निकै ठूलो भिड देखिन थालेको छ । पुरानो बानेश्वर चोक देखि मैतिदेवी मोडिने तर्फ एउटा सानो कोठामा पुर्वेली परिकारको स्वाद लिनेहरुको अहिले लामै लाइन छ । बस्ने ठाउँ नपाएर उभिएरै, अनि घण्टौं कुरेर बस्छन् काठमाडौंबासी । पुरानो बानेश्वर चोकैमा भर्खरै खुलेको छ, भक्का हाउस । काठमाडौंमा मम, बर्गर, पिज्जाको स्वादले आजित बनेकाहरुका लागि भक्का नयाँ श्वाद बन्न सकेको छ । त्यसैले त पुरानो बानेश्वरको भक्का हाउस खचाखच ग्राहकले भरिएको हुन्छ । लाइट नेपालको टोली भक्का हाउस पुग्दा संच
Apr102018 by suchanapatiNo Comments
अर्थ / व्यापार, समाज
दिपक खड्का,चन्द्रौटा चैत्र २७ । कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगरगाँपालिका वडा न.५ डालपुर बस्दै आएका जगरनाथ पाल तरकारी खेती तिर आकर्षित भएका छन । उनले ९ कट्ठामा तरकारी खेती गरि ७ जनाको परिवार पाल्दै आएका छन । हाल ४२ वर्ष पुगेका पाल १० वार्षको उमेर देखि खेती गदै आएको समझना सुनाए ज्ञानको अभावमा परमपरागत खेती गर्दे आएको र गरिबीको कारण पढन न सकेनी आफना छोरा,छोरीलाई नजिके रहेको शिव मा.वि. डालपुरमा अध्यन गर्ने गरेको जानकारी दिए । रुपन्देहिको खुरदावानगर गा.वि.स. वडा न ९ लकडीगढवा गाँउ वाट ४ वर्ष पहिला बसाई सराई गरि आएका उनको परिवार अहिले डालपुरमा तरकारी खेतिमा रमाउना थालेका छन । विजयनगर गाँउपालिकाको डालपुर गाँउका बासिदाहरु धान,गेहु खेतिमा निर्भर रहने कामको खोजीमा ज्याला मजदुरी गर्ने र आफनो खेत बाझौ राखि मजदुरी गर्ने गरेको स्थानिय वासिदा शंकर बि.क.ले बताउनु भयो । हाल डालपुर गाँउका लागि नमुना बनेका पाल पर